Iimpawu ezihamba phambili ze-18-Hole kwi-PGA Tour (Zonke iinqununu ezingama-60)
I-PGA Tour Record: I-Low-18-Hole Score
Ingxelo yomlinganiselo ophantsi kakhulu we-18-hole ngaphakathi kwinqanaba le- PGA Tour ye-58, kwaye kwimbali ende enokutyelela bekukho iindwendwe ezisi-9 kunye neengxelo ezingaphantsi kwe-60. Nantsi ukukhangela kwinqanaba eliphantsi lokurekhoda eli-58, kwaye, Ukongeza, bonke abagadi begalufu abaye batshaya 59 kwiPGA Tour.
Umlinganiselo ophantsi kakhulu kwi-PGA Tour History u-58
58 - uJim Furyk , umjikelo wokugqibela, u-2016 Uhambo lwezithuthi (27-31), i-TPC River Highlands (ngo-70)
Ngo-Agasti 7, ngo-2016, iFuryk yaba yi-golfer eyokuqala-nje kuphela kwi-PGA ye-Tour yembali kunye nomjikelezo we-58 kwisiganeko sokutyelela. Kwakuyi-12-ngaphantsi kwamanqaku kwi-TPC e-Highlands e-Connecticut, igumbi legalufu elimiselwe kwiiyure ezingaphezu kwama-6 800 kunye ne-70 ye-Championship Championship.
UFuryk empeleni wayenalo i-putt engama-57 ekuluhlaza okotshanje, okwakusanda kudlula umgodi. I-Furyk yayineebhokhwe ezili-10 kunye nokhozi ngexesha lokujikeleza, kunye neesisixhenxe ezisixhenxe. Funda kabanzi malunga ne-58 kaFuryk .
Qaphela ukuba igama likaFuryk livela ngezantsi, kwakhona, phakathi kwabagadi begalufu kunye no-59 ngexesha lomcimbi wePGA Tour. Nguye kuphela u-golfer onobubanzi obungaphantsi kwe-60 kwimbali yeTyelelo.
Zonke i-59s kwi-PGA Tour History
Amanqaku angama-18 engama-59 athunyelwe ngokuphindwe kathathu kwimbali yokutyelela. Nantsi abagadi begalufu abaye batshaya 59 kwi-PGA Tour:
Al Geiberger : Ngo-1977 iMemphis Classic (29-30), iColonial Country Club (nge-72). UGeiberger wayengowokuqala ukudubula 59 kwi-PGA Tour, kwaye kwenzeka okwesibini. Waya phambili ukuphumelela umdlalo, kodwa ezinye zakhe ezintathu zijikelezayo ziyi-72, i-72 kunye no-70. Nguye kuphela i-golfer ebudeni beli xesha lePGA Tour ukunqoba umdlalo (ngaphandle kwee-majors) ngaphandle kwee-60s.
Chip Beck : 1991 Las Vegas Invitational (30-29), i-Sunrise Golf Club (nge-72). I-Beck's 59 yenzeke ngekota yesithathu. Waqedela ukubopha kwindawo yesithathu.
UDavid Duval : 1999 UBob Hope Chrysler Classic (31-28), iPGA West (Palmer Course) (nge-72). I-Duval's 59 yayisejikelezweni yokugqibela, kwaye yayiquka ukhozi kwisibopho sokugqibela. Emva kokuqala ujikelezo lokugqibela u-7 ukukhupha umkhokelo, u-Duval's 59 kunye ne-cow-hole yangomtsalane wamnika u-1-stroke win.
UPawulos Goydos : Ngo-2010 uJohn Deere Classic (31-28), i-TPC Deere Run (ngo-71). I-Goydos '59 yenzeke kwinqanaba lesibini, kwaye wagqiba umqhudelwano oboshwe kwindawo yesibini.
I-Stuart Appleby : 2010 iGreenbrier Classic (28-31), i-Old White Course (nge-70). I-Appleby ye-59 yenzeke ekugqibeleni kokugqibela kwaye wayiphumelela umdlalo ngesifo esisodwa.
UJim Furyk : I- BMW Championship ye- 2013 (31-28), iConway Farms Golf Club (ngo-71). I-Furyk 59 yafika kwikota yesibili. Wagqiba kwindawo yesithathu.
UJustin Thomas : 2017 I-Sony Open (30-29), i-Waialae Country Club (ngo-70). UTomas '59 wenzeke ngeenxa yokuqala, enye iveki emva kokunqoba kwakhe kwiSBS Tournament of Champions. UTomas wathola i-59 ngokumbeka ukhozi kwisibopho sokugqibela.
UAdam Hadwin : Umngeni we-CareerBuilder (201-30), i-LaQuinta Country Club (nge-72). I-Hadwin 59 yenzeke ngekota yesithathu.
UGeiberger, u-Duval, u-Appleby noTomas bawuthabathele iikholeji apho batyhola 59; U-Beck, Goydos, uFuryk noHadwin abazange bakwenze. UTomas, eqinisweni, waqhubeka nokubeka amanqaku angama-72 engaphantsi kwimbali yokutyelela.
I-Geiberger kunye neGoydos badubula i-59 yabo ngaphantsi kokuphakanyiswa, iimeko ezihlambulukileyo kunye neendawo.
I-Geiberger, i-Beck, i-Duval kunye ne-Hadwin yama-59 yayingama-13-ngaphantsi kwamanqaku; I-Goydos neFuryk yayingu-12-ngaphantsi kwe; U-Appleby noTomas babengu-11-ngaphantsi kwe-par.
Okokuqala 59 Kwimbali ye-PGA Tour
Njengoko sibonile, i-golfer yokuqala yokudubula 59 kwi-PGA Tour tournament yayingu-Al Geiberger ngexesha le-second round ka-1977 iMemphis Classic (yintoni namhlanje eyaziwayo njenge- FedEx St. Jude Classic ) kwiColonial Country Club eTennessee.
UGeiberger uthumele loo mvuzo ngoJuni 10, 1977. Wakwenza njani? Ubetha 14 kwi-14 fairways kunye ne-18 kwi-18 imifino - ukuphelelisa ibhola . Kodwa kuthatha ngaphezu kwelokuba uphendule i-59; Kwakhona kufuneka wenze ezininzi ze-putts. Kwaye uGeberger wenza loo nto, naye: Wayenamaqela angama-23, inani elibandakanya i-middle-range ye-birdie kunye ne-putts. Wakhupha kwakhona ukhozi ephuma eluhlaza elukhombeni omnye.
Ngaphandle kokuphakama, ukucoceka nokubeka indawo, i-round yeGeberger yayimangalise kakhulu kubadlali bakhe bebambiswano kuba iqela leColonial Country lide lide ixesha elide (kwiiyure ezingaphezu kwama-7 200) kwaye yayinemifuno ye-bermudagrass, engakhokelela ekubeni "ubumnandi" kwiindawo zokubeka .
Nangona ubuxoki obukhethiweyo bebekhona kuloo mini, uGeiberger watshela iGolit Digest ngo-2012 ukuba wayengenakho ukukhumbula ukuphucula ubuxoki bakhe ngexesha lojikelezo.
Kwaye iGeberger yavala ujikelezo ngesitayela, ixhamla iminyango ye-17 neye-18 ukurekhoda phambili kwi-PGA Tour. Eyona nxalenye ephantsi kunazo zonke idutshulwa ngexesha elifanayo kunye ne-Geiberger 59 engama-65 nguRaymond Floyd .
Ingxelo Yayiphi I-Geiberger Break?
Xa uGiberger wabeka irekhodi elitsha le-PGA Tour ngo-1977, wawaphulaphi irekhodi? Ngaloo xesha, i-golfers ezisixhenxe zabelana ngerekhodi engama-18 engama-60.
I-golfer yokuqala eyadutshulwa 60 kwi-PGA Tour yayingu-Al Brosch ngo-1951 eTexas Open. Kwaye i-recent-recent, phambi kweGeberger 59, yayinguSam Snead 60 kwi-Opening ye-Dallas ka-1957. Phakathi koBrchch kunye neSnead, uBill Nary, uTed Kroll, uWally Ulrich, uTommy Bolt noMike Souchak babhalise kwakhona i-60, ngoko ke bonke babelana ngeRekodi uGiber.
Qaphela ukuba bekuyiminyaka engama-26 ukususela kwixesha lika-Brosch lama-60 ade uGeiberger abeke irekhodi elitsha le-PGA Tour ngonyaka we-1977. Kude ixesha elide kunoko ukususela kwi-Geiberger 59 kwaye irekhodi elo limi, nangona i-golfers ezininzi zibophelele.
Ingaba kukho nawuphi na umntu ophantsi kobuTsha ngaphantsi kwama-58?
Ewe! Kodwa kungekhona kwi-PGA Tour. Ngexesha elide lonke eliphantsi kwegolfu elingama-18, jonga:
Yiyiphi imilinganiselo engaphantsi kwe-golf-hole engama-18 erekhodiweyo?
I-PGA Tour BMW Championship
Thabatha, Thatha, ulande, Fumana